Tuya Wifi Circuit Breaker ခလုတ်တိုက်ခြင်း အကြောင်းရင်းများ - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
Tuya Wifi Circuit Breaker ခလုတ်တိုက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများ
ဤဆောင်းပါးသည် အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြသည်။Tuya Wifi Circuit Breaker ခရီး
1. Overload trip- Overload trip သည် short circuit trip နှင့် ကွဲပြားသည်။ ဝန်ပိုခရီးသည် စက္ကန့်အနည်းငယ်မှ မိနစ်အနည်းငယ်အထိ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ခလုတ်တိုက်သည့်အချိန်သည် MCB စွမ်းရည်၏ အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လိုင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲပြီးနောက် အမှားပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ NS၊
2. ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝါယာကြိုးရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် circuit breaker ၏ စွမ်းရည်အလွန်နည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်တကယ်တော့ ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ ရွေးချယ်ခြင်းကို အမှန်တကယ် ပါဝါသုံးစွဲမှုအရ တွက်ချက်ထားပြီး circuit breaker ကို အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ရောနှောမထားသင့်ပါ။
3. Leakage trip- Leakage trip တွင် အလွန်သိသာထင်ရှားသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်းသည် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ညာဘက်ခြမ်းရှိ အကာအကွယ်ကိရိယာတွင်ရှိပြီး ချော်ထွက်သည့်နေရာသည် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ရှိနေစဉ်။ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ညာဘက်ရှိ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ စမ်းသပ်ခလုတ် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုပါက circuit breaker ကိုပိတ်၍မရပါ။
4. ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းလမ်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပလပ်ထိုးပါ၊ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှုခရီးစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
Circuit Breaker 1P 2P 3P 4P ၏ အဓိပ္ပါယ်